Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: မှော်ဘီအခြေစိုက်တပ်ရင်း ၉၁ နဲ.လုံခြုံချထားသည့်တပ်တွေယနေ.မနက်ပိုင်း ၃ နာရီတွင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊နှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ (အသံဖိုင်နားထောင်ရန်)
မှော်ဘီအခြေစိုက်တပ်ရင်း ၉၁ နဲ.လုံခြုံချထားသည့်တပ်တွေယနေ.မနက်ပိုင်း ၃ နာရီတွင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊နှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ (အသံဖိုင်နားထောင်ရန်)
Fire breaks out between LIB 91 and Burma junta security force Thursday morning by Ethnic Voice of Burma
Fire Breaks out between Security force that sent to guard the movement of Light Infantry Battalion No 91 at Hmaw Bi, Rangoon Division in the morning of Wednesday March 30 2011. After 15 minutes exchange gun fires between two side, two soldiers injured from junta security force side. မှော်ဘီအခြေစိုက်တပ်ရင်း ၉၁ နဲ.လုံခြုံချထားသည့်တပ်တွေယနေ.မနက်ပိုင်း ၃ နာရီတွင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊တပ်ရင်း ၉၁ တပ်ကိုလုံခြုံရေးယူထားသည့်တပ်ကအရင်ပစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့ တပ်ရင်း ၉၁ ကထိခိုက်မှုမရှိ၊ ၉၁ ကပြန်ပစ်ခတ်တဲ့အခါလုံခြုံရေးတပ်ဘက်နှစ်ယောက် ထိုခိုက်သေဆုံး၊ပစ်ခတ်မှုက ၁၅ မိနစ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊မာတ်ခ်ျလ ၂၈ ၇က်နေ.တွင်တောင်းဆိုချက်လေးချက်ကိုတင်ပြပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲအပြစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်၊တပ်ရင်း ၉၁ ကိုဝိုင်းထောက်ခံကြပါ၊ကူညီကြပါ။